ရခိုင်အရေးဖြေရှင်းရာတွင် ယုံကြည်မှုနှင့် မေတ္တာတရားသည် အရေးကြီးဆုံးဟု ရခိုင်ပြည်နယ် ဝန်ကြီ? - Yangon Media Group
ရခိုင်အရေးဖြေရှင်းရာတွင် ယုံကြည်မှုနှင့် မေတ္တာတရားသည် အရေးကြီးဆုံးဟု ရခိုင်ပြည်နယ် ဝန်ကြီ?
ရခိုင်အ ရေးဖြေရှင်းရာတွင် ယုံကြည်မှုနှင့် မေတ္တာတရားသည် အရေးကြီးဆုံး ဖြစ်ကြောင်း ရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းအငြိမ်းစား ဗိုလ်ချုပ် မောင်မောင်အုန်းက ပြောသည်။ သြဂုတ် ၁၂ ရက် ရန်ကုန်မြို့၊ ပြည်လမ်းရှိ နိုဗိုတယ်ဟိုတယ်တွင် ”အကျပ်အတည်းတွင်းမှ ခေါင်း ဆောင်မှု”ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဆွေးနွေးသည့် ယောမင်းကြီးဇရပ်ဆွေးနွေး ပွဲ၌ ရခိုင်အရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဆွေးနွေးရာ ၎င်းကအထက်ပါ အတိုင်းပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
”နောက်တစ်ခုက ကျွန်တော်တို့ကဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဖြစ်တယ်။ ကျွန်တော်တို့တစ်တွေဟာ မေတ္တာကိုလည်းသုံးဖို့လိုတယ်။ ကြီးကြီး ကျယ်ကျယ် အခြားနိုင်ငံရေးအ တွေးအခေါ်တွေ ပြောနေရုံနဲ့လည်း အလုပ်မဖြစ်ဘူး။ မေတ္တာ။ ကျွန်တော်ဝန်ကြီးချုပ်ဘဝက နားတဲ့အခါမှာ လူထုကို ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်တည် ဆောက်ပေးခဲ့တဲ့လမ်းတွေ၊ တံတား တွေ၊ အဆောက်အအုံတွေ အားလုံးက ရခိုင်ပြည်နယ်မှာကျန်ရစ်ခဲ့ပါပြီ။ ကျွန်တော်နဲ့ပါတာတစ်ခုပဲရှိတယ်။ ပြည်သူတွေရဲ့မေတ္တာပဲ။ မေတ္တာပေးတယ်။ မေတ္တာရတယ်။ ဆိုတော့ တခြားကိစ္စတွေလည်း အများကြီးပေါ့။ ဒါပေမဲ့ အရေးကြီးဆုံးက ယုံကြည်မှုနဲ့မေတ္တာကလည်း ရခိုင်ကိစ္စမှာ အရေးကြီးတယ်လို့ပြောပါရစေ”ဟု ၎င်းက ပြောသည်။ ယင်းအပြင် ရခိုင့်အရေးနှင့် ပတ်သက်ပြီး နိုင်ငံတကာနှင့် ပြောဆိုရာတွင် ပေးသင့်ပေးထိုက်သည်များကို ပေးရမည်ဖြစ်သလို ရသင့်ရထိုက်သည်များကိုလည်း ပြန်တောင်းနိုင်ရန်လိုအပ်ကြောင်း ၎င်းကဆက်လက်ပြောသည်။
လက်ရှိ ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးတွင် အစိုးရ၊ တပ်မတော်နှင့် ဒေသခံပြည်သူများမှာ မျဉ်းပြိုင်သဏ္ဌာန် ဖြစ်နေပြီး ဆုံမှတ်ကိုအမြန်ဆုံးရှာသင့်ကြောင်း၊ မရှာနိုင်ပါက ရခိုင်အရေးမှာ အနုတ်လက္ခဏာဆောင် နေဦးမည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ပြောသည်။ ”ယနေ့ဖြစ်နေတဲ့အနေအထား ကို ကျွန်တော်သုံးသပ်ရလို့ရှိရင် အစိုးရရယ်၊ တပ်မတော်ရယ်၊ ပြည်သူရယ်က မျဉ်းပြိုင်ဖြစ်နေတယ်။ ကျွန်တော်တော်တော်ခံစားရတယ်။ ဝမ်းနည်းရတယ်။ ကျွန် တော်တပ်မတော်သားတစ်ယောက် ဖြစ်သလို၊ ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်ခဲ့ဖူးတယ်။ အခုတစ်ခါ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ် စားလှယ်။ ဒီဇာတ်လမ်းမှာ ပြန်ပြီး တော့ကောက်ရရင်လေ။ မျဉ်းပြိုင် ဖြစ်တာကို ဆုံမှတ်တစ်ခုမှာဆုံလို့ မရဘူးလား။ ဆုံမှတ်မှမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်ထင်တယ် မိုင်းနပ်စ်ပဲ”ဟု ၎င်းကဆိုသည်။ ယင်းအပြင် ရခိုင်ပြည်နယ် အရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ဆောင်ရွက်ချက်များသည် ရေတိုအဆင် ပြေစေရန် ဆောင်ရွက်ခြင်းမျိုးမ ဟုတ်ဘဲ ရေရှည်အတွက်စဉ်းစား ဆောင်ရွက်သင့်ကြောင်း ၎င်းက ပြောသည်။
”ရခိုင်ပြည်နယ်ကိစ္စကလည်း အိပ်ရင်း မတ်တတ်လမ်းလျှောက် နေလို့တော့မရဘူး။ အလိုက်သင့်သလို၊ အဆင်ပြေသလို၊ လတ်တ လောအဆင်ပြေအောင်လုပ်လို့မရဘူး။ သမိုင်းကြောင်းတွေ၊ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးတွေ၊ မိမိနိုင်ငံရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာ ဒါတွေနဲ့ ဆက်စပ်ပြီးတော့လုပ်မှ ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့ တည်ငြိမ်တိုးတက်မှုက အစစ်အမှန်ဖြစ်မယ်”ဟု ၎င်းကပြောသည်။ ယင်းအပြင် ရခိုင့်အရေးသည် နိုင်ငံတော်အသည်းနှလုံးတွင် စူးနေသည့် ဆူးတစ်ချောင်း ဖြစ်ကြောင်းနှင့် အားလုံးပူးပေါင်း ဖြေရှင်းရန်လိုကြောင်း ၎င်းက ဆက်လက်ပြောသည်။ ”ရခိုင့်အရေးဟာ နိုင်ငံတော်ရဲ့အသည်းနှလုံးမှာစူးနေတဲ့ ဆူးတစ်ချောင်းလိုပါပဲတဲ့။ ရခိုင့်အရေးဟာ နိုင်ငံအရေးပါပဲ။ ဒီတော့ ကျွန်တော်တို့တွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံသား၊ တိုင်းရင်းသားတွေပါပဲ။ ဆို တော့ အားလုံးသော နိုင်ငံတစ်ဝန်း လုံးသော တိုင်းရင်းသားပြည်သူ တွေက ရခိုင့်အရေးကို ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ဖို့လိုပါတယ်”ဟု ရခိုင် ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းက ပြောသည်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးသည် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ယခုရက် ပိုင်းအတွင်းလာရောက်ခဲ့ပြီး ရခိုင် ပြည်နယ်၊ မောင်တောမြို့နယ်သို့ လည်းသွားရောက်ခဲ့သည်။ ၎င်း၏ မြန်မာပြည်ခရီးစဉ်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရနှင့် ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ရခိုင်ပြည်မြောက်ပိုင်းမှ နေရပ်စွန့်ခွာသူများကို ပြန်လည်လက်ခံရေးဆွေးနွေးမှုများ အဆင်ပြေချောမွေ့စေရန် မြန်မာ- ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နှစ်နိုင်ငံဝန်ကြီးများအကြား တိုက်ရိုက်အဆက် အသွယ် ပြုလုပ်နိုင်မည့် Hot-Line (သီးသန့်တယ်ဖုန်းလိုင်း)ထားရှိရန် အပါအဝင် သဘောတူညီ ချက်ရှစ်ချက်ရရှိခဲ့ကြောင်း နိုင်ငံ တော်အတိုင်ပင်ခံရုံးက သြဂုတ် ၁ဝ ရက်တွင် သတင်းထုတ်ပြန်ထားသည်။